EaseUS MobiSaver: Ka soo cesho Xogta la tirtiray iPhone-kaaga | Wararka IPhone
EaseUS MobiSaver: Qalabka ugu fiican ee lagu soo ceshan karo xogta la tirtiray ee ku saabsan macruufka
Eder Esteban | | dhowr
Mid ka mid ah cabsida ugu weyn ee isticmaaleyaasha ayaa masaxida xogta si qalad ah qalabkaaga, sida iPhone. Tan iyo markii ay jiraan waqtiyo markii aan haysan gurmad ah file sheegay. Xaaladaha noocaas ah, waxaan u baahannahay inaan u adeegsanno aalado naga caawinaya inaan ka soo ceshano xogtan taleefanka taleefanka. Dhammaantood si isku mid ah waxtar uma laha, laakiin waxaa jira mid ka sarreeya inta kale, oo ah EaseUS MobiSaver.
Thanks to EaseUS MobiSaver waan awoodi doonaa soo kabsado xogta la tirtiray ka qalab iPhone ama macruufka sida nidaamka qalliinka. Waxaan uga soo kabsan karnaa qaab fudud, kana hortageynaa inay lumaan. Marka waxaa loo soo bandhigayaa sidii xal waxtar badan u leh isticmaaleyaal badan.
Sababaha xogta loo tirtiro iPhone-kaagu wuxuu noqon karaa kan ugu kala duwan. Waxaan noqon karnaa kuwa si qalad ah u tirtiray iyaga oo u maleynaya inay ahaayeen faylal kale. Waxa kale oo ay sababi kartaa cilad dhanka taleefanka ah, sida cilad soo wajahday, ama haddii virus ama malware ay ku dhacday, taas oo sabata xogta la sheegay in laga tirtirayo aaladda. Waxa muhiimka ah ayaa ah in kiisaskaas oo dhan EaseUS MobiSaver ay caawin karto.
Maaddaama qalabkani ka shaqeynayo dhammaan noocyada xaaladaha, waa mid ka mid ah xooggiisa. Marka dhib malahan hadii iPhone ama iPad fashilmeen, hadii ay tahay sababtoo ah virus ayaa jiray, ama sababtoo ah feylashaan si qalad ah ayaa loo tirtiray, qalabku wuxuu kaa caawinayaa inaad soo ceshato feylashaan markasta. Intaa waxaa dheer, waa qalab in taageertaa dhammaan noocyada faylasha.
1 Kabsado faylasha ka iPhone leh EaseUS MobiSaver
2 Sida loo soo dejiyo EaseUS MobiSaver
Kabsado faylasha ka iPhone leh EaseUS MobiSaver
Hawlgalka qalabkani waa mid aad u fudud. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaad kala soo baxdo barnaamijkan soo kabashada xogta kumbuyuutarka, waxaa jira noocyo badan, sidaa darteed waxaan ku isticmaali karnaa Windows ama MacOS dhib la'aan. Marka la rakibo kombiyuutarka, waa inaan ku xirnaa iPhone-keena kumbuyuutarkeena adoo isticmaalaya fiilada, si la mid ah sida aan had iyo jeer u isticmaalno arintan.
Marka qalabku ku xiran yahay kombuyuutarka, waa inaan doorannaa habka aan rabno inaan u isticmaalno soo kabashada feylashaas. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo laga kala xusho arrintan. Tallaabada xigta waa inaad sugto EaseUS MobiSaver inay shaqadeeda qabsato, maxaa yeelay bilaabi doonaa inuu iskaanka telefoonka, raadinta feylal laga tirtiray gudaheeda. Waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo xaaladaha qaarkood, laakiin waqtigaas kadib waxay soo bandhigi doontaa natiijooyinka ay heshay. Waan arki karnaa feylasha la soo celiyay.
Warka fiicani waa in EaseUS MobiSaver uu doono u oggolow natiijooyinka shaandhaynta ku saleysan nooca. Sidaa darteed, haddii aad raadineysay inaad soo ceshato sawirro, waad weydiisan kartaa inay ku tusiso oo keliya sawirrada ku jira natiijooyinka skaanka la yiri, si markaa loo arko natiijooyinka u dhigma dareenkaas. Isku mid ayaa lagu samayn karaa dhammaan noocyada faylasha. Intaa waxaa dheer, sidaan soo sheegnay, waxay taageertaa dhammaan noocyada qaabab, dokumentiyo, fiidiyoow, maqal, sawirro, emayl, ama xitaa feylal sida ZIP ama RAR. Maxaa ka dhigaya qalab aad u badan.
Markii baadhitaanku ka dhammaado iPhone-ka oo aannu helnay faylal aannu doonayno inaan ka soo kabanno, waa inaan soo xulnaa. Kadib waxaan usii ambaqaadi doonaa inaan ku soo celino taleefankeena Marka daqiiqado yar gudahood waxaan mar labaad ku heli doonnaa aaladda. Nidaamku waa sahlan yahay mana qaadan doono waqti aad u dheer.
Sida loo soo dejiyo EaseUS MobiSaver
EaseUS MobiSaver waa aalad hubaal ah inay daneynayaan isticmaaleyaal badan, iyo sidoo kale shirkado. Hab wanaagsan oo looga soo kaban karo faylasha la tirtiray ee ka soo baxa iPhone ama iPad wakhti kasta iyada oo aan dhibaato badani ka jirin. Waa qalab waxaa lagu heli karaa laba nooc. Dhinaca hal, waxaa jira nooc bilaash ah, laakiin sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar Pro ah, oo la bixiyo, oo na siinaya taxane ah hawlo dheeri ah. Mid waliba waa inuu tixgeliyaa midka ku habboon waxa ay raadinayaan.
Labada xaaladoodba waa macquul tijaabi EaseUS MobiSaver kombiyuutarkaaga oo habkaan isku baro barnaamijka ama iska hubi inay runti tahay aaladdii la filayay iyo ta aad rabto inaad u adeegsato kiiskan si aad uga soo kabato xogta lagu sheegay taleefanka. Waxaad wax badan ka ogaan kartaa labadan nooc, shaqooyinkooda iyo sida loo helo xiriirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » EaseUS MobiSaver: Qalabka ugu fiican ee lagu soo ceshan karo xogta la tirtiray ee ku saabsan macruufka
Philips wuxuu cusbooneysiiyaa kala duwanaanta Hue inta lagu jiro IFA 2019
Waxaa jira 5 astaamo cusub oo iOS 13 ah oo aan la heli doonin maalinta la soo bandhigayo